Fiberglass mijery eny tontolo eny - China Wuqiang County Huili Fiberglass
Fiberglass varavarankely efijery
Ary mbola hanohon Window Screen
PVC Coating Fiberglass kofehy fanjairana
Fiberglass kofehy fanjairana
Fiberglass mijery eny tontolo eny
Fiberglass voatetika Strand Mat
Polyest Er Window Screen
fiarovana varavarankely efijery
Fiberglass mivantana mijery eny tontolo eny dia mifono amin'ny silane-monina sizing sy mifanaraka amin'ny unsaturated resin, vinyl resin, ary epoxy resin. Tsy nampiasaina hamokarana gratings, hazo isan-karazany sy ny mombamomba.
1. kely dia kely hanankorontana nandritra ny fanodinana
2. Fast lena-ka lena-amin'ny alalan'ny
3. Tsara fibre pielezana sy ny fananana milina ankapobeny ambony
4. kofehy dia mora nanokatra, mba hanalana sarona ny filaments tamin'ny kely dia kely miasa
5. hery High
6. Na dia payout olana
7. Low tahan'ny maina abrasion ny fifandraisana Creel hevitra
Main fampiasana ahitana FRP fanamboarana ny fantsona samihafa diameters, avo-tsindry fiovana fantsona ho an'ny solika, tsindry fanaka, fitehirizana fiara mifono vy, ary, insulation fitaovana toy ny jiro hazo ary fiarovana fantsona.
Fiberglass mijery eny tontolo eny - Ireo vokatra dia maro faran'ny Fiberglass mitohy (splice maimaim-poana) kofehy ampiasaina kofehy teo ambony vy reels fahafahana. Fitaratra manokana fanampin-kery dia sarotra eo amin'ny natiora sy ny fanodinana marina mitaky toe-piainana. Zavatra tsy vokatry tsy ampy amin'ny kofehy toy ny KEVLAR sy ny hafa ARAMIDS. Ny fampiasana voalohany indrindra ao fiara ignition tariby ho toy ny fitaovana fototra sy ny fifandraisan-davitra telegrama. Fiberglass fanampin-kery manolotra ny tariby & tariby tsena avo lenta, sy ny vola lany fampisehoana avo-mahomby.
Fiberglass mijery eny tontolo eny dia karazana fibre fitaratra manokana izay afaka hanohitra ny fahasimban'ny alkaline akora toy ny simenitra. Azo ampiasaina mba hanamafisana simenitra (GRC), sy ny hafa gypsum organika inorganic sy fitaovana, ary ho toerana mendrika handraisana vy sy ny asbestos amin'ny tsy mitondra entana-simenitra singa safidy. Product fampisehoana mifanaraka amin'ny fenitra-pirenena sy ny orinasa, alkali fanoherana hitsena ny United States PCI (Prestressed Concrete Society) sy ny International Association GRC fepetra.
Direct mijery eny tontolo eny no mifanaraka amin'ny thermosetting resins, toy ny unsaturated polyester, vinyl Ester, epoxy sy phenolic resins.
Direct mijery eny tontolo eny no be mpampiasa ny kofehy widing sy Pultrusion, mamokatra tenona sy ny multiaxial lamba mijery eny tontolo eny. Ny fampiharana FRP manana fantsona, tsindry fanaka, makarakara, simika fiara mifono vy sy ny sisa.
Post fotoana: Apr-28-2018
Jieguan Wuqiang County Hengshui, Hebei, Shina.